Blogs | Phoe Phyu & Associates
PHOE PHYU AWARDS AND LAW QUEEN
လောကတွင် အလှရှာပုံတော် ဖွင့်သူတို့ ရှိပါသည်။ ထိုသူများတွင် ကျွန်တော် ရှေ့နေ ဖိုးဖြူလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟု ပြောလိုပါသည်။ ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက အလှတရားအား ရှုထောင့် ပေါင်းစုံမှနေပြီး ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသော်လည်း ပြီးပြည့်စုံသော ဖွင့်ဆိုမှု မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ လူတို့သည် မိမိကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အခြေပြုပြီး အလှတရားကို ဖွင့်ဆိုရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်မှု မိမိ ကျင်လည်ရာလောကဖြစ်သည့် ဥပဒေလောကမှာပဲ အလှတရားတို့ကို ရှာဖွေမိပါသည်။ ကျွန်တော့် အမြင်တွင် အလှတရားသည် ရှုပါရုံအဆင်းမျှသာမက အသိ ဉာဏ်ပညာ အနက်အရှိုင်း ပေါ်တည်မှီနေပါသည်။ အလှတရားကို ရှာဖွေရုံမျှသာမက အသိအမှတ်ပြု ချီးကျုး ဂုဏ်ပြုလိုပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် အလှတရား ရှာပုံတော်ဖွင့်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်တော်သည် အောက်ပါဆုများကို ဥပဒေနှင့် တိုက်ရိုက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေသူများ၊ ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေသူများထဲမှ ရွေးချယ်ချယ်ပြီး ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်လိုပါသည်။
အလှဆင်းသွင်မြင့်မြတ်ပညာဆု (Dual Beauty Award)
အဆိုပါဆုအား ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခံရမည့်သူမှာ ရှုပါရုံအဆင်းမျှသာမကဘဲ စိတ် အတွင်းသဏ္ဍန်ပါလှပသူဖြစ်ရပါမည်။ဥပဒေပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးချွန်ထက် မြက်သူများအား ရွေးချယ်ဆုပေးအပ်ပါမည်။
ထူးချွန်စတိုင်ကျရှေ့နေဆု (Sharp and Stylic Lawyer Award)
ဥပဒေပညာတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်ရုံသာမက ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုတွင်လည်း စတိုင်ကျသည့် ရှေ့နေအား ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပဒေအလှမောင်မယ်ဆု (Law King and Queen)
ဥပဒေကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများထဲမှ ပညာထက်မြက်ပြီး လှပကျော့ရှင်းသူ များ၊ တည်ကြည်ခန့်ငြားသူများအား ဤဆုကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိလုပ်ငန်းခိုင်မာဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ ရှေ့နေ ရရှိဖို့ရာ
စလုပ်တုန်းကတော့ အသေးစားလုပ်ငန်းလေးပါပဲ ဒါပေမယ့် ကြီးထွားလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အရာရာဟာ ပေါ့သေးသေး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အသေးစားလုပ်ငန်းလေးကနေ ရှယ်ယာတွေစုပြီး လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်အောင် ကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကို သေချာခိုင်မာအောင် လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်တော့မယ့် လူတိုင်းအတွက် လေကျွင်းပြောတဲ့ ဂရုပြုစရာအချက်များ
SME နဲ့ Start-Up လုပ်ငန်းတွေကို စလုပ်တာဟာ ထင်သလောက် လွယ်ကူလှတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်အောင်မြင်ပြီးသား နာမည်ရပြီးသား လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ရတာထက် ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ဒီလို အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သမားရိုးကျလမ်းစဉ်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေတာထက် တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာကို အသုံးချပြီးလုပ်ဆောင်တာက မိတ်ဆွေကို ပိုပြီးမြန်ဆန်တိုးတက်စေမှာပါ။
PROCEDURES AND CONTRACTUAL RELATIONSHIPS FOR EXPORT AND IMPORT ACROSS INTERNATIONAL BORDERS
Exporting and importing goods across international borders are great challenges and important opportunities for individual business. Also it enlarges the global market, increases the business activities of that business and vice versa helps grow national economies.
ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများတွင် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်သင့်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လိုက်နာသင့်သော ဥပဒေများ
ကမ္ဘာလုံးချီ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာခြင်းမှတဆင့် နိုင်ငံခြားငွေ လည်ပတ်စီးဆင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု အချိုးများမြင့်တက်လာစေနိုင်ပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများလည်း ပိုမို ဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါတယ်။